China Aluminium CNC igwe Parts Manufacturer na Supplier | Walley
Mere họrọ anyị:
1.Anyị bụ ndị a factory na ihe karịrị 20 afọ CNC machining ahụmahụ.
2. Ihe dị ka 95% nke ngwaahịa anyị bụ kpọmkwem ebupụ ka USA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Kwupụtara nkwanye ugwu.
3.Kasị anyị igwe zụrụ site na USA na Japan dị ka ejiri akara HAAS (3-axis, 4-asxis cnc igwe igwe), Nwanna, TSUGAMI (igwe ntụgharị ntụgharị 6), Miyano na ndị ọzọ. otú anyị nwere ike ime ka elu kpọmkwem akụkụ dị ka gị ndidi chọrọ.
4.We nwere ike na-achịkwa elu imecha dị ka polishing / ahịhịa / ájá ọgbụgba ọkụ, Nkịtị anodize / kwesie anodize, nwa oxide, plating (Chrome / Nickel / zinc / gold / silver…)
5.Based na anyị ezi mma, ezi ọrụ na ezi Ebe E Si Nweta ndekọ anyị ahọrọla ka KA suppliers site Alibaba. N'okpuru njikọ bụ ụfọdụ n'ime anyị azụmahịa azụmahịa na Alibaba, ị nwere ike ịlele.
Voerly ígwè bụ a ngwa ngwa na-eto eto emeputa, na-enwe olileanya ịghọ onye gị na n'ọdịnihu.
Anyị Machining Uru
CNC-egwe ọka-enye anyị ohere ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi igwe gị akụkụ si ngwaahịa ihe onwunwe nke ị na-ahọrọ, na ma plastic ma ọ bụ metal. 2D na 3D shapes na-adị mfe kere ka a elu ọkọlọtọ nke ziri ezi na n'elu imecha. A na-ahazi arụmọrụ igwe igwe CNC site na iji sọftụwia Delcam Powermill. Ngwá ọrụ na nhazi ọrụ na-enyere aka iji hụ na ntụgharị ọsọ ọsọ na izi ezi. Anyị ji TaiQun na HURCO igwe si Taiwan tinyere ụfọdụ ụdị ndị China maka maka ọrụ nke mgbagwoju anya na-adịchaghị achọ.
Anyị machining ike
Nkenke ibe +/- 0.01mm ， + / - 0.005mm
Dị usoro JPEG, PDF, AI, DWG, DXF, IGS, ntụpụ ụkwụ
Ihe ndị dịnụ Metal: carbon steel, alloy steel, igwe anaghị agba nchara, Aluminom, Brass wdg.
Plastics: ABS, PMMA, PTFE, PE, POM, PA, UHMW, wdg.
Ọgwụgwọ ihu Metal: egweri, Polishing, Eserese, bicolor-obibi, Electroplating, Screen obibi, Wiredrawing, Laser osise, anodizing wdg
Plastics: egweri, Polishing, Eserese, bicolor-printing Electroplating, Mbipụta ihuenyo, Ihe osise Laser wdg.
Njirimara Mpịakọta Mpịakọta Production na Production
Nkenke CNC machining agbanye, na-agwụ ike, Drilling, Countersinking, Eriri igwe, Threading esịtidem / mpụga, Machining wdg
Anyị na-agbaso mgbe niile ịnye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma dabere na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Anyị na-emejuputa njikwa mma ngwaahịa site na njikọta nke "mgbochi" na "nyocha", ma nye teknụzụ njikwa njikwa dị mma ma nwee ntụkwasị obi maka nrụpụta. CNC nkenke machining duru mezue gị nyefere.
Mmụta na ọzụzụ bụ ụzọ kachasị mma iji hụ na emepụtara talent. Voerly na-eduzi nzukọ ọmụmụ ihe mgbe niile na nzukọ ọmụmụ ihe dị mma iji meziwanye nkà ọkachamara nke ndị ọrụ mara mma, mara teknụzụ kachasị ọhụrụ, wee zute nka chọrọ nke ọkwa dị iche iche.
Medical, Photoelectric, Auto market, nkwukọrịta, Aerospace and Defense, Aerospace, Security, Machinery.
Nke gara aga: Aluminium CNC agbanye Components
Aluminium CNC Ọrụ
CNC Aluminium igwe Parts
Igwe aluminom igwe
Cnc igwe Aluminium Nkebi
CNC igwe Mmanụ Ala Anodizing
Omenala CNC Milling Part Aluminom Machine